Oromo News 06.21.21 | KWIT
Namni hospitaala jiru ammo gara nama 54 hir’atee jira, lakkoofsi kunis akka March 2020 dhuma irraa baaye xiqqaate jira.
Qorannoo bultii 14 godhamae akka biyyati guututi present 2% taee jira, fi qoranan guuyaa torbaa ammo 1.9% dha.
Qorannoo bultii torbaa keessati Woodbury County keessati present %1 akka taee fi torbaan darbe keessa namni qabame 5 dha. Kunis akka qorannoo Website corona virus akka state guututi himanitti. Counties dhan siouxland baaye kana keessati virus kun xbaaye xiqqaate kan mul’ateedha. Innis Monona, Ida, Cherokee, Buena Vista, Lyon O’Brien, Osceola, Emmett, and Pocahontas fa’a dha. Haatau male, qorannoo bultii 7 keessati Sioux County keessati 10% fi Plymouth ammo 4% dha. Sioux County torbaan darbe keessa namni qabame 7 dha.
Gabaasni annual kan Annie E Iowa akka biyyati guututi daaima eegumsa kennuudhan sadarkaa 9ff irraa akka jirtu himan.
Lakkoofsa ijoole lakkaawan irrati Economy, barumsaa, fayyaa akkasumas warraa fi ummata naanicha irrati sadaraan kaahamedha.
Dubattooni akka jedhanitti lakkoofsa Iowa lakkofsguddaa irra jira, ammas hojii baaye ijoole dhaafi warraa hojachuu jirani.
Gabaasni kunis federal child tax credit aka guddatuu fi state warra xuqqan fi seera poolisa naanicha akka jabeessan himan.
Iowa Department kan natural resource kan “ I am a Recyler Campaign” biyyati guututi hojii irra akka oola yaalutti jiran.
Recyling kun waggaa 40 kan jiruu yoo tau, garuu ogeessi akka jedhetti haala guutun kan hin guutamnedha.